Iza amin'ireo SEO ireo no tena voamarina amin'ny milina fikarohana ho an'ny backlinks?
Amin'izao fotoana izao dia fantatry ny mpikaroka goavana manerantany ny miasa miaraka amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny karazam-pitomboana, izay miankina amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny roanjato eo ho eo. Anisan'ireo hafa, ny karoka Google fikarohana dia manombatombana ny rindran-damina amin'ny tranonkala rehetra amin'ny fampiasana ireo karazana SEO ireo. Alohan'ny hanehoana anao ny tena zava-dehibe raisin'ny Google ho "mahatakatra" ny sandan'ny doka rehetra ao amin'ny tranonkala, avelao aho hanomboka amin'ny tempololy fototra.
Inona no mahatonga ny birao?
Voalohany indrindra, inona ny famerenana famaritana amin'ny famaritana? Tahaka an'i Google mihitsy, ny milina fikarohana lehibe rehetra dia mamaritra ny rindranasa ho toy ny rohy na fidirana avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera hafa, miverina amin'ny tranokalanao manokana. Ary andeha hojerena izany - tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nisy ny hafatra marina marina navoakan'ny manampahefana tao amin'ny Google mikasika ny mombamomba ny rohy mifandray amin'ny ankapobeny izay isan'ny laharam-pahamehana fototra telo. Izany no antony mahatonga ny mili-pikarohana Google manome lohamilina be loatra ho an'ny amin'izao fotoana izao - hosting servidor gratuito. Mba hametrahana izany tsotra izao, izy ireo dia "vato" matoky ny fahatokisana, izay manamarina ny fahamendrehan'ny tranonkala tsirairay eo amin'ireo mpampiasa ary manamafy ny hatsaran'ny pejy rehetra amin'ny ankapobeny.
Ny zavatra dia ny hoe "tranonkala maoderina" amin'ny aterineto dia midika fa ny pejy tsirairay dia azo itokiana avy amin'ireo mpampiasa mivantana, ireo manam-pahaizana momba ny indostria (na ireo mpilatsaka amin'ny tendrontany) ireo tranonkala hafa na bilaogy hafa, ary ireo fitaovam-pikarohana lehibe farany. Mariho anefa, fa loharanom-baovao an-tserasera manana fahefana ambony no tsy midika fa ny iray amin'ireo mpamoaka fivarotana be mpividy indrindra. Raha ny zava-misy, raha toa ka misy bilaogy na tranokala iray misy andian-tsarimihetsika manan-danja sy manan-danja ary manan-danja iray - mety ho toy izany koa ny loharano azo ekena, angamba tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny. Amin'izany fomba izany, ny milina fikarohana rehetra dia manamarina adiresy an-tariby mba hanapahana raha ny tranokala na ny bilaogy dia mendrika ny mampiseho ny vokatra ambony amin'ny SERP.
Ny Google Search Engine dia manamarina ny Backlinks amin'ny:
isa mifandraika amin'ny isam-pianakaviana tsirairay mifandray amin'ny pejy tsirairay na ny blôginao;
mampifandray ny fahasamihafana (i. f. , karazana backlinks isan-karazany, miaraka amin'ny PageRank tsy mitovy, avy amin'ny toerana maro samihafa ao amin'ny tranonkala araka izay azo atao);
pagerank (PR), manam-pahefana (DA), ary loharanom-pejy (PA) avy amin'ny loharanom-baovao rehetra mifandray amin'ny pejy web anao (i. f. , tsara kokoa ny manana andalana kely miaraka amin'ny fahefana ambony sy ny fitokisana, fa tsy ny doka goavam-be misy azy ireo);
miverina amin'ny toetran'ireo zokiolona dia hita fa sarobidy kokoa noho ireo avy amin'ireo loharano vaovao izay lasa velona kokoa vao haingana;
vohikala na bilaogy manan-danja iray dia hanome ny rindran-damina mahazatra izay manana tombam-bidy lehibe raha ampitahaina amin'ny rohy tsy misy dikany sy tsy misy dikany avy amin'ny loharano tsy fantatra;
fampiharana ho an'ny Black-Hat SEO (ohatra rohy momba ny toeram-pambolena, rohy spam, pejy vavahady, kodiarana rohy, vatofantsika miafina, sns.) dia nahazo hery goavana hiteraka fiantraikany goavana eo amin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao;
rohy mifototra amin'ny context (i. f. , ny rindran-kaonty hita ao amin'ny votoatin'ny tranonkala votoatin'ny tranonkala) dia mahery kokoa, fa tsy ny rohy hafa rehetra (rohy, tongotra) hafa hita any amin'ny widgets manokana, plugins, na fizarana ao amin'ny pejy.